MACLUUMAADKA YAR EE SCHNAUZER DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Macluumaadka Yar ee Schnauzer Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Duc the Mini Schnauzer oo jira 5 sano— 'Duc waa 5 jir Mini Schnauzer ah. Isaga wuxuu ku taxan yahay milix iyo basbaas laakiin waxaan ku adkeyneynaa inaan helno basbaas! Waxaan dhahnaa isagu waa 'timo cad' laakiin waa caqli badan yahay! Waxaa loo tababaray inuusan ciyi karin, marka marka uu fiirsado waxaa dhici karta inay wax qaldan yihiin. Wuxuu jecel yahay inuu ku ciyaaro qalabka uu ku ciyaaro oo had iyo jeer kaligiis ayuu ku ciyaaraa. Isagu waa mid aad u xiiso badan oo jecel, wuxuu jecel yahay inuu nagu soo dhowaado oo uu ogaado meesha aan joogno waqti kasta. Wuxuu jecel yahay dadka, laakiin wuxuu u egyahay inuu taxaddar muujiyo markuu la kulmayo dad cusub. Wuxuu ku qiimeeyaa eeyaha xaalad-kiis-kiis wuxuuna go'aamiyaa haddii ay saaxiibbo noqon doonaan ama cadaawayaal yihiin. Wuxuu qabaa cillad weyn-eey!
Liistada Gunta Yar ee Schnauzer Mix eeyaha
hound basset iyo Cocker isku darka spaniel
Gunta yar ee Schnauzer waa eey yar oo si xoog ah loo dhisay. Jidhku waa afargeesle iyo saami ahaan. Madaxa adag waa qaab qaab leh oo afar gees ah. Ballaarinta madaxa ayaa waxyar ka yaraanaya dhagaha ilaa indhaha. Afka ayaa xoog leh oo si qarsoodi ah ayuu ku dhammaadaa. Sanku waa madowyahay. Qaniinyada waa maqas. Indhaha qoto-dheer, indhaha yar-yar ayaa midabkoodu yahay bunni madow. Dhegaha kor loogu taagaa madaxa ayaa badanaa loo jajabiyaa meel. Marka dhagaha laga tago dabiici ahaan waa kuwo yaryar oo qaabeeya V, oo laabanaaya madaxa. Lugaha hore waa toosan yihiin. Dabada lagu soo xidho ayaa sare loo qaaday oo waa la qaaday. Dabada ayaa la jeexjeexay oo kaliya in ku filan si markaa looga arki karo dusha gadaasha eeyga. Fiiro gaar ah: waa sharci daro in la goosto ama la xirto eeyaha ama dabada inta badan Yurub. Mini Schnauzer wuxuu leeyahay jaakad laba jibbaaran. Koodhka dibaddu waa wirin oo koodhkuna wuu jilicsan yahay. Koodhka waa la jarjarayaa si uu u yeesho gadh, shaarib iyo sunnayaasha uurka leh. Midabada koofiyadda waxaa ka mid ah madow, caddaan, milix iyo basbaas, iyo madow iyo qalin.
Gunta yar ee Schnauzer waa eey caqli badan, kalgacayl leh, faraxsan. Waa mid firfircoon, ciyaar leh, si wanaagsan ula dhaqaneysa carruurta waxayna jeceshahay inay dadkeeda la joogto. Kalgacal, u hanqal taaga, u heellan oo naxariis badan. Hogaan sax ah waxay la jaan qaadi kartaa eeyaha kale. Bulsho si fiican this. Waxay ka dhigtaa wehel wanaagsan iyo xayawaanka guriga lagu haysto. Mini Schnauzer ma dhageysan doono haddii ay dareento inay ka maskax adag tahay milkiilaheeda. Milkiilayaashu waxay u baahan yihiin inay dejiyaan, laakiin adag yihiin, oo leh hawo dabiici ah oo amar leh. Eeyahaani malaha jilif jilicsan, laakiin waxay ka dhawaajiyaan dhawaq hooseeya, oo cod la qaaday. Noocani wuxuu sameeyaa ilaaliye wanaagsan iyo ugaarsade xayawaan ah. Ey fudud oo lala safri karo. Qaarkood waa lagu xareyn karaa shisheeyaha haddii aadanuhu uusan xasilloonida noloshooda siin, laakiin inta badan way jecel yihiin qof walba. Ha u oggolaan in eeygan yar uu horumariyo Cudurka Dog yar , dabeecadaha bini'aadanka ee kiciya eeyga eygu guriga ku maamulo. Tani waxay sababi kartaa heerar kala duwan oo ah dhibaatooyinka dhaqanka , oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn kala-go'id walaac , noqosho ula kac ah, kacsan, ciil badan, ilaalin , geesinimo, mararka qaarkood dabeecad leh, oo aan ka waabanayn inaad weerartid eeyo aad u waaweyn. Ey isku dheelitiran oo ku filan jimicsi maskaxeed iyo mid jireed yeelan doonaan shaqsiyan gebi ahaanba ka duwan. Kuwani ma aha astaamaha Gunta yar ee Schnauzer, laakiin waa dabeecado ay keeneen sida eygu ula dhaqmo dadka hareerahooda ah. Dhammaan waxay ku jirtaa aadanaha. Isla marka dadku ay bilaabaan inay noqdaan hogaamiyeyaal run ah, habdhaqanka eeyga ayaa si fiican u beddeli doona.
Dhererka: 12 - 14 inji (30 - 36 cm)
Miisaanka: 10 - 15 rodol (5 - 7 kg)
U nuglaanta cudurka beerka, dhagxaanta kalyaha, kaadi macaanka, cilladaha maqaarka, cudurka von Willebrand iyo finanka. Sidoo kale dhibaatooyinka indhaha la iska dhaxlo. Miisaan buu ku fududaa, haku badin quudinta.
waxa ey ey yihiin clifford
Guntinta yar ee loo yaqaan 'Miniature Schnauzer' waa eey u wanaagsan nolosha guriga oo wuxuu ku xasilloon doonaa gudaha illaa iyo inta uu ka helayo jimicsi ku filan.
Eeyahan yar ee firfircoon ayaa u baahan maalin kasta, dheer, kacsan, socod ama orod , oo jecel kalfadhiyada ciyaarta xarkaha. Inta lagu jiro socodka eeyga waa in loo sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaashiisa qofka haya hogaanka, sida maskaxda eeyga maskaxdiisa hogaamiyaha ayaa hogaaminaya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu noqdo aadanaha. Eeyooyinka aan helin socodka maalinlaha ah waxay u badan tahay inay muujiyaan dhibaatooyinka dhaqanka. Bar iyaga inay galaan oo ka baxaan albaabka iyo irdaha laga galo aadanaha.
Qiyaastii 15 sano. Ma muujineyso calaamado da 'illaa da'da nolosha.
timo xiiran Jack russell terrier
Jaakada dharka ka sameysan ma aha wax adag in la iloobo, in kasta oo ay u baahan tahay fiiro gaar ah. Shanlee oo ku caday maalin kasta burush silig gaagaaban si aad iskaga ilaaliso isugeynta. Haddii wax dermo u muuqdaan waa in la jarjaro. Waa in la googooyaa dhammaan ilaa dherer laba jeer sanadkii, guga iyo deyrta. Ku wareeji indhahaaga iyo dhegaha maqas aan afka lahayn oo nadiifiya afuufka cuntada ka dib. Eeyaha xayawaanka ah jaakaddiisa waxaa sida caadiga ah laga gooyaa jirka kore waxaana lagaagala tagaa xoogaa dheer qaybaha hoose, lugaha iyo madaxa. Show eyda waxay u baahan yihiin in gacanta laga xayuubiyo oo la jarjaro halkii laga jari lahaa. Noocani wax yar ayuu u daadanayaa timo la'aan waana eey u fiican dadka qaba xasaasiyadda.
Gunta yar ee Schnauzer waa nooc Jarmal ah. Intii lagu gudajiray sannadihii kudhowaad qarnigii, labadaba Jarmal jilicsan iyo timo jilicsan Schnauzer pups ayaa ka muuqday isla qashin. Naadiga Jarmalka ee Pinscher Schnauzer Club ayaa bilaabay siyaasad u baahan caddayn saddex jiil oo ka mid ah jaakadaha Schnauzer timaha aan caadiga ahayn ee diiwaangelinta. Tani waxay si dhakhso leh uga caawisay dejinta nooca oo ka dhigtay iyaga nooc ka duwan kan Jarmal Pinscher . Kuwani Schnauzers waxaa loo bixiyay magaca Standard Schnauzer. Gunta yar ee 'Schnauzers' waxaa lagu horumariyey iyada oo laga gudbayo yar yar Heerka Schnauzers leh Affenpinscher iyo suurto gal ah Poodle . Magaca Schnauzer oo laga soo qaatay ereyga Jarmalka 'Schnauze,' oo macnihiisu yahay 'muzzle.' Waxaa loo adeegsaday jiir ahaan walina wuu hayaa awoodda, laakiin badiyaa waa eey wehel ah maanta. Awoodda Schnauzer qaar ka mid ah hibooyinkeeda waxaa ka mid ah: ugaadhsiga, raad-raaca, ratter, ilaaliyaha, u hoggaansamida tartanka iyo qabashada tabaha.
Ugu badnaan Schnauzer yar-yar
Buba iyo Boomer the Mini Schnauzers
staffordshire bull terrier feer isku dhafka
Joseph Dale (Joey) Miniature Schnauzer oo 4 jir ah— 'Saaxiib ayaa waayey guri dabaq ah oo waxay naga codsadeen inaan sii haysano ilaa ay ka hesho guri kale. Wuxuu noo yimid isagoo gunti ka buuxdo! Waan googooynay oo waxaan siinay timo gaaban oo dhab ah. Qiyaastii hal sano ka dib waxay heshay aqal laakiin ma awoodi kari wayday lacagta dheeraadka ah ee eyga haysato sidaa darteed waxay tiri si fiican ayaan u daryeelaynaa markaa way samaysay sidaasna ku ilaali Waan helnay dhexdhexaad ah oo laga hubiyey dhakhtarka xoolaha. Waxaa soo baxday inuu leeyahay xasaasiyadda maqaarka dhakhtarka xoolaha ayaa noo sheegay in aan siino Benadryl AM iyo PM. Waanu ka gaabineynaa isaga si aan u ogaanno inuu xoqmayo ama leefleefayo. Dhegihiisa weligood lama jarin dabada na ma xidhnayn laakiin waanu jecel nahay isaga habkan. '
Basbaas Ghadayaha Yar ee Schnauzer da'da 2 sano
Qashin yar oo Schnauzer ah eeyo
'Ha, magacaygu waa SGT Wynston! Waxaan ahay Ghadafi yar oo Schnauzer waxaanan hada noqday 4 jir. Waxaan qiyaasayaa inaad dhihi kartid waxaan ahay eey safar ah, waxaan booqday KY, TN, GA, FL iyo Key West si aan u magacaabo wax yar! Waan jeclahay inaan ku socdo gaariga, hadal socod , ku ciyaar kubbadyadayda kuna cayaaro dawooyinkayga! Sayidkaygu maalin walba wuu ii sheegaa sida aan u caqli badanahay -) Hadaad i waydiiso runti ma ahi a Eey at dhan, waxaan ahay a 4 lugood leh ... jilif jilif !! '
Eeg tusaalooyin dheeraad ah oo ah Gunta yar ee Schnauzer
Gunta yar Schnauzer Sawirada 1
Gunta yar Schnauzer Sawirada 2
Gunta yar Schnauzer Sawirada 3
Gunta yar Schnauzer Sawirada 4
Saddexda Schnauzer Breeds
Schnauzers: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
dhammaan eeyaha yar yar ee siberian husky
merle alapaha bul bulug buluug buluug ah
tan iyo caddaan puppy puppy
madow iyo caddaan shar pei
Australia midabada eey xoolo iyo xariiqyada